5G सर्कुलेटर र Isolator SmCo चुंबक
G जी, पाँचौं जेनेरेशन मोबाइल संचार टेक्नोलोजी उच्च बृद्धि, कम ढिलाइ र ठूलो जडानको सुविधाहरूको साथ ब्रॉडबैंड मोबाइल संचार टेक्नोलोजीको एक नयाँ पुस्ता हो। यो म्यान-मेशिन र वस्तु आपस मा कनेक्ट गर्न नेटवर्क पूर्वाधार हो।
चीजहरूको इन्टरनेट 5G को मुख्य लाभार्थी हो। G जी को मुख्य ड्राईभ फोर्स केवल द्रुत नेटवर्कको लागि उपभोक्ताहरूको बढ्दो माग मात्र हो, तर औद्योगिक वातावरणमा नेटवर्कि devices उपकरणको प्रसार पनि हो। यी उद्योगहरू डाटा संकलन र विश्लेषण गर्न, व्यापार प्रक्रिया अझ बढी कुशल बनाउन, उत्पादकता सुधार गर्न, र लगातार उत्पादन र सेवाहरू सुधार गर्न नेटवर्कि devices उपकरणहरूमा निर्भर गर्दछ। G जीले व्यवसायलाई चीजहरूको इन्टरनेटबाट बढेको जानकारीको बढ्दो रूपमा व्यवस्थापन गर्न र रोबोट सहयोगी सर्जरी वा स्वायत्त ड्राइभिंग जस्ता मिशन जटिल सेवाहरूको लागि आवश्यक द्रुत इन्स्ट्यान्ट मेसेजि improve सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
सर्कुलेटर र isolator 5G बेस स्टेशन को कोर उपकरणहरु मध्ये एक हो। सम्पूर्ण मोबाइल संचार प्रणाली सामान्यतया मोबाइल संचार पूर्वाधार, मोबाइल संचार कभरेज प्रणाली र मोबाइल संचार टर्मिनल उत्पादनहरू मिलेर बनेको हुन्छ। बेस स्टेशन मोबाइल संचारको आधारभूत उपकरणसँग सम्बन्धित छ। बेस स्टेशन प्रणाली सामान्यतया आरएफ फ्रन्ट-एन्ड, बेस स्टेशन ट्रान्सीभर र बेस स्टेशन कन्ट्रोलरको हुन्छ। आरएफ फ्रन्ट-एन्ड सिग्नल फिल्टरिंग र अलगावको लागि जिम्मेवार छ, बेस स्टेशन ट्रान्सीभर सिग्नल प्राप्त गर्न, पठाउन, प्रवर्धन गर्ने र घटाउन जिम्मेवार छ, र बेस स्टेशन कन्ट्रोलर संकेत विश्लेषण, प्रशोधन र बेस स्टेशन नियन्त्रणको लागि जिम्मेवार छ। ताररहित पहुँच नेटवर्कमा, सर्कुलेटर प्राय: बेस स्टेशन एन्टेनाको आउटपुट सिग्नल र इनपुट संकेत अलग गर्न प्रयोग गरिन्छ। विशिष्ट अनुप्रयोगहरूको लागि, सर्कुलेटरले अन्य उपकरणहरूसँग निम्न कार्यहरू प्राप्त गर्न सक्छ:
१. यसलाई एन्टेना सामान्यको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ;
२. द्रुत मापनको साथ बीपीएफको साथ संयोजनमा, यो तरंग विभाजन सर्किटमा प्रयोग गरिन्छ;
The. टर्मिनल रेसिस्टर सर्कुलेटरको बाहिरी भागमा पृथकको रूपमा जडित छ, अर्थात्, संकेत तोकिएको पोर्टबाट इनपुट र आउटपुट हो;
External. बाह्य एटीटी जडान गर्नुहोस् र परिलक्षित शक्ति पत्ता लगाउने प्रकार्यका साथ सर्कुलेटरको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टको रूपमा, दुई टुक्रा सामरियम कोबाल्ट डिस्क मैग्नेटफेराइट-लोड ज junक्शन पूर्वाग्रह गर्न आवश्यक चुम्बकीय क्षेत्र प्रदान गर्नुहोस्। उत्कृष्ट क्षरण प्रतिरोधको क्षमता र working 350० डिग्री डिग्रीसम्म काम गर्ने स्थिरताको कारण, दुवै SmCo5 र Sm2Co17 म्याग्नेट सर्कुलेटर वा आइसोलेटरहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
G जी विशाल एमआईएमओ टेक्नोलोजीको प्रयोगको साथ, सर्कुलेटर र पृथककर्ताहरूको उपभोग उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ, र बजार स्पेस G जीको धेरै गुणा पुग्नेछ। G जी युगमा, नेटवर्क क्षमताको आवश्यकता G जी भन्दा धेरै बढी छ। विशाल MIMO (बहु-इनपुट बहु-आउटपुट) नेटवर्क क्षमता सुधार गर्नका लागि एक कुञ्जी प्रविधि हो। यस टेक्नोलोजीलाई सहयोग पुर्‍याउन, G जी एन्टेना च्यानलहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ, र एकल सेक्टर एन्टेना च्यानलहरूको संख्या channels च्यानल र G च्यानलबाट G जी अवधिमा 64 64 च्यानल हुनेछ। च्यानलहरूको संख्या दोब्बर पार्दा पनि सम्बन्धित सर्कुलेटर र पृथककर्ताहरूको मागमा उल्लेखनीय बृद्धि हुनेछ। एकै साथ, हल्का वजन र न्यूनतमकरणको आवश्यकताको लागि, भोल्यूम र तौलका लागि नयाँ आवश्यकताहरू अगाडि राखिन्छ। थप रूपमा, कार्य फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको सुधारको कारण, संकेत प्रवेश कमजोर छ र ध्यान दिगो छ, र बेस स्टेशन घनत्व G जी भन्दा बढी हुनेछ। तसर्थ, G जी युगमा, सर्कुलेटर र पृथककर्ताहरूको प्रयोग, र त्यसपछि सामरियम कोबाल्ट म्याग्नेट उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ।
हाल विश्वमा सर्कुलेटर / पृथककर्ताका मुख्य उत्पादकहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्काईवर्क, क्यानाडामा एसडीपी, जापानमा टीडीके, चीनमा एचटीडी, आदि समावेश गर्दछ।